पछिल्लो अपडेट : कहाँ कहाँ कसको जीत ! – ebaglung.com
पछिल्लो अपडेट : कहाँ कहाँ कसको जीत !
२०७४ जेष्ठ २, मंगलवार ०५:३०	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
बागलुङ २०७४ जेठ २ । बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउपालिकाको १ मा नेपाली काँग्रेस र २ मा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ । १ को अध्यक्ष खडग थापा र २ को अध्यक्षमा विद्यापति शर्मा विजयी भएको छन् ।
यसैगरी बडीगाड गाउपालिका २ मा एमालेका विष्णु भुषाल सहितको प्यानल विजयी भएको छ । ताराखोला १ मा माओवादी केन्द्रको प्यानलले जितेको छ भने गल्कोट नगरपालिकको १ दुदिलाभाटीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेत्र बुढाथोकीको प्यानल विजयी भएको छ ।
सहकर्मी लोकेन्द्र निरासीले दिएको जानकारी अनुसार निसीखोला गाउपालिका वडा, २ को अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका कुविर विक र अन्य ४ सदस्यहरु नेपाली काँग्रेसबाट विजयी भएका हुन् । निसीखोला-३ मा वडा अध्यक्ष जुनविक्रम शाही सहित सबै सदस्यहरु जनमोर्चा प्यानलबाट विजयी भएका छन् ।
निसीखोला वडा १, २ र ३ को मतगणना अनुसार प्र्रमुखमा नेपाली काँग्रेसले ११ सय ७, राजमो एमालेले ८०३ पदमा नेपाली काँग्रेसले १२ सय २४,माओवादी केन्दले ११ सय ७, राजमा एमालेले ८ सय ३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
बरेङ गाउँपालिकाको धुल्लुवासकोटमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण पौडेल सहितको प्यानल विजयी भएको छ ।
यसैबीच बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर २ को मतगणना सकिएको छ वडा अध्यक्षमा एमालेका जीवन आचार्य विजय भएका छन् । सदस्यहरुमा तीन जना नेपाली काँग्रेस र एक जना एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् ।
वडा नं १ र २ को गरी मेयरमा नेका १००४, एमाले –१०२७ तथा उपमेयरमा राप्रपा –११५५, कांग्रेस –८३२ मत प्राप्त गरेका छन् । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार मेयर पदमा नेपाली काँग्रेस भन्दा एमाले २३ मतले अगाडी रहेको छ ।
सहकर्मी कमल पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार बडीगाड गाउपालिकाको ३ नं वडामा एमालेका खड्ग पुन ४५५मत ल्याएर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन । यस वडाका सवै सदस्यहरु एमाले प्यानलले जितेको छ ।
बडीगाडको हाल सम्म गणना गरिएको १, २ र ३ नं वडाहरुको मतानुसार प्रमुखमा एमाले प्यानलका मेहर सिँह पाईजाले सबैभन्दा बढी १४८४ मत ल्याएका छन भने नेकाकी गण्डकी थापा अधिकारीले ८२८ र राजमोका भिमसेन वनले ६५२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी उपप्रमुखमा एमाले प्यानलले ४३३, नेकाले ८२२ र राजमोले ६२९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
सहकर्मी खगेन्द्र विश्वकर्माले ताराखोलाबाट दिएको जानकारी अनुसार ताराखोला गाउपालिका वडा नं २ को अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका भद्रबहादुर घर्ती प्यानल सहित विजयी भएका छन् । उनले ९१९ मत प्राप्त गरेका थिए । सदस्यहरुमा फुलमाया पुन जलजला, पुर्णा कुमारि सुनार, खडक विश्वकर्मा भिम राेका विजयी भएका छन् ।
ताराखोला गाउपालिकाको वडा १ र २ को २२ सय ७१ मतगणना अनुसार प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका प्रकाश घर्तीले १५७४, नेपाली काँग्रेसका डण्डपाणी कँडेलले ३६४, एमाले राजमोकी पूर्णा चालिसेले ३७ र स्वतन्त्र ऋषिराम रोकाले ११५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
गल्कोट नगरपालिका-२ मा अध्यक्ष सहित नेपाली काँग्रेसका हेमन्त भण्डारीको प्यानल बिजयी भएको छ ।
लोकेन्द्र निरासीले दिएको जानकारी अनुसार ढोरपाटन नगरपालिका-३ मा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका हेमेन्द्र पुनले २ सय ८२ मत लिएर वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अन्य सदस्यहरुमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका बल बहादुर पुन, एमालेका ३ सदस्यहरु बालकृष्ण घर्ती, बेलकुमारी छन्त्याल र गीता दमाई विजयी भएका छन् ।
काठेखोला गाउपालिका- ३ को वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका यामबहादुर श्रीस सहित प्यानलै विजय भएको छ । श्रीसले नेपाली काँग्रेसका नगेन्द्र भण्डारी भन्दा ७ सय ७० भन्दा बढी मतले विजय प्राप्त गरेका थिए ।
गल्कोट नगरपालिका वडा नं ३ को अध्यक्षमामा नेपाली काग्रेसका वीरजङ भण्डारी सहित पाँचैजना निर्वाचित भएका छन् ।
कुस्मीसेरावाट विजय रानाले दिएको जानकारी अनुसार जैमिनी नगरपालिकाको ९ र १० वडाको भरखर सम्पन्न मतगणनाको परिणाम अनुसार दुवै वडाहरुमा राष्टिय जनमोर्चाका उमेदवार विजयी भएका छन् ,
वडा नं ९ मा जनमोर्चाका भविन्द्रकुमार थापा (वीरेन्द्र)ले ६१६ मत ल्याएर प्यानल नै विजय भयो भने वडा नं १० मा नरबहादुर थापाले १०९० मत ल्याएर प्यानलै विजय भएको छ ।
मेयरमा नेपाली काग्रेसले ६५५, उपमेयरमा ६५०, अध्यक्षमा ५७५ माओबादी केन्द्र मेयरमा २४७, उपमेयरमा २६३, अध्यक्षमा ३४५, सयुक्त प्यानेलको मेयरमा ८३, उपमेयरमा ७९ र वडाअध्यक्षमा ६१, नयाँ शक्तिले ३ मत प्राप्त गरेको छ ।
सहकर्मी बालकृष्ण सुवेदीका अनुसार गलकोट नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस अग्र स्थानमा रहेको छ । अहिले सम्मको मत गणना अनुसार ३ ओटा वडामा काङ्ग्रेसको प्यानल बिजयी भएको छ । १ स्थानमा मात्र नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त प्यानल बिजय भएका छ्न । वडा नमूना १ दुदिलाभाटिमा संयुक्त प्यानलका नेत्र बुढाथोकी सहित सम्पुर्ण प्यानल बिजय भएको छ । त्यसै गरि वडा नम्बर २ नरेठांटिमा नेपाली काङ्ग्रेसका हेमन्त भन्डारी ,वडा नम्बर ३ हटियामा नेपाली काङ्ग्रेसका वीरजंग भन्डारी र वडा नम्बर ४ हटियामा बल बहादुर खत्री सहित सम्पुर्ण प्यानल बिजयि भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
यो समाचार तयार पर्दा सम्म नगर प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेस का भरत गैरेको २५९६ ,राजमो एमालेका टंक केसिको १३३८ ,माओबादी केन्द्रका फमलाल निउरेको ८७७ मत प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी उप प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसकि रेनुका काउचाको २५२४ ,राजमो एमालेकि रत्ना भण्डारी को १४०५ र माओवादी केन्द्रकि ललिता थापाको ९६२ मत प्राप्त भएको छ । अहिले वडा नम्बर ५ र ६ को मत गणना चलिरहेको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको वडा नं ३ मा एमाले प्यानलका लक्ष्मी बास्कोटा १२६५ मत ल्याएर प्यानलै संग विजयी बनेकी छन् ।
अहिलेसम्मको मत .गणना अनुसार मेयरमा एमालेले २६८० काँग्रेसले २१५० उपमेयरमा राप्रपाले २६५१ र काँग्रेसले १८५५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
निसीखोला गाँउपालिकामा वडा नँ ४ मा टिकानिधी पौडेल सहित र ५ मा हर्कमान बुढा सहित नेपाली काँग्रेसको प्यानल बिजयी भएको छ।
बडीगाड -१ को अध्यक्षमा जनमोर्चा विजयी, काठेखोलामा झिनो मतले काँग्रेस अगाडी
जैमिनी नगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट : राजमो प्यानल अगाडी !